मोदीले भने- सगरमाथाको देश सागरसँग सीधा जोडिनेछ | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > राजनीति > मोदीले भने- सगरमाथाको देश सागरसँग सीधा जोडिनेछ
मोदीले भने- सगरमाथाको देश सागरसँग सीधा जोडिनेछ
२४ चैत, नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दा सुरु र अन्तिममा नेपाली भाषासमेत प्रयोग गरे । बाँकी समय हिन्दीमा बोलेका मोदीले केपी ओली र आफ्नो विकास अभियानसम्बन्धी भिजन एकै प्रकारको रहेको बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सगरमाथाको देशलाई सागरसँग जोडिने बताए । त्यसैगरी काठमाडौंलाई रेलले भारतसँग जोड्नेसमेत बताए ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले गरेको सम्वोधनको नेपाली अनुवाद यस्तो छः
यसैप्रकार रेल्वेमा पनि हामी कनेक्टिभिटी बढाउन चाहन्छौं । र, यसका लागि काठमाडौंदेखि भारतलाई जोड्ने एक नयाँ रेल लाइनलाई संंयुक्तरुपमा विकसित गर्नेबारेमा पनि हाम्रो सहमति बनेको छ ।
म एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, उहाँकी धर्मपत्नी र पूरै डेलिगेसनलाई भारतमा हार्दिक स्वागत गर्छु र यो पनि चाहन्छु कि फेरि भेट होला । धेरैधेरै धन्यवाद ।
नाकाबन्दीपछि फेरिए मोदी !
ओली र मोदीबीच दुइपटक वान टु वान वार्ता भयो, वार्तामा भएका केही कुरा ओलीले आफ्ना निकट सहयोहीसँग शेयर गरेका आधारमा यति बुझ्न् सकिन्छ कि मोदीले नाकाबन्दीपछिको अवस्था महसुस गरेका छन् ।
अब नेपालमा स्थिर सरकार बनेको भन्दै मोदीले ओलीसग मनैदेखी सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रष्ट पारेका छन् । मोदीसँगको वार्तापछि ओली पनि उत्साहित देखिएका छन् । उनी उत्साहित हुनुको अर्को कारण के पनि हो भने यसपटक परम्पराको निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न उनी सफल भएका छन् ।
पहिलो पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा छलफल र वक्तव्यमा परेन । जनमतको हिसाबले मोदीले आफूजस्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई खुसी पार्न यसपटक कति पनि कन्जुस्याइँ गरेनन् ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यो खुसी र प्रसन्नता प्रकट भयो । मोदीले ओली र आफ्नो नारा अब एउटै भएको भन्नू अर्थपूर्ण छ । कुनै नयाँ र विवादास्पद सम्झौता नगरी ओलीले भ्रमणलाई सद्भाव विस्तार गर्नेमा सीमित पारेका छन् ।
शुरु र अन्तमा नेपाली बोल्नु र ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्दा नेपाली भाषामै ट्विट गरेर मोदीले आफुप्रती नकारात्मक रहेको नेपाली मन पुन जित्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । onlinekhabar
जेल चलान भएका सलमान धरौटीमा रिहाई भए ,के भयो सहमति
नेपाल–भारतबीच यस्तो सम्झौता ! पुरा पढ्नुहोस
राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. पुष्प कँडेल नियुक्त
सञ्चार राज्यमन्त्री बास्कोटाले भने-‘सूचना प्रविधि ऐन ल्याइने छ’
घरको छतबाट खसेर २७ वर्षिया सुनामलाको ज्यान गयो